‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक छ ? ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ? - khull Post‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक छ ? ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ? - khull Post
‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक छ ? ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ?
पुरुषोत्तम ढकाल ११ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:०८ 63 Views
काठमाडौं: संभवत पहिलो पटक ‘लकडाउन’ को अनुभूति गरिरहेका नेपालीहरुका लागि यो नौलो अभ्यास हुनसक्छ । दर्जनौं पटक कफ्र्यूको सामना गरिसकेका कतिपय नेपालीहरु ‘लकडाउन’ बारे अनभिज्ञ छन् ।